Ukuze isizukulwane amadala Teymurova nokunamathisela isibe buyindlela esisemqoka ngokumelene hyperhidrosis. Ngenxa esihle magciwane yayo, isiqedaphunga futhi uDries wadalula akalilahlile ngokuhlathulula ukusebenza kwawo futhi kuba kulezi zinsuku. Pasta ezikhishwe ngokukhululekile kuwo wonke amakhemisi dermatologists ukuncoma ezidingekayo ukufaka lo mkhiqizo ekhaya lakho arsenal.
Teymurova nokunamathisela akuyona panacea, njengoba umzimba ngamunye has bezibona ayo, kodwa hhayi omunye izinkulungwane zabantu ukuthi basizwa ukuba babhekane nalesi hyperhidrosis wendawo. Lokhu kufakazelwa ezingenakubalwa okubuyayo ngakho. Lo mkhiqizo has inhlanganisela Ukwakheka esiyingqayizivele, okubandakanya ezihlukahlukene izingxenye. Ngamunye wabo sigcwalisa futhi sithuthukisa isenzo lomunye. Iqhaza eyinhloko isinqandakuvunda kuphuma zinc (30%). Cishe inani elifanayo iqukethe talc (28%). Umthelela magciwane ibangelwa zokuhlanganisa ku oyiyo boric acid. Ngaphezu kwalokho, Teymurova nokunamathisela yakhiwa amanzi distilled nobudlova uwoyela peppermint, glycerin, acetate phambili, formaldehyde hexamethylenetetramine, sodium tetraborate futhi salicylic acid.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ingxenye ukuqaliswa EU we mkhiqizo akuvunyelwe. Isizathu salokhu kukhona formaldehyde yayo abamelwe nomthofu. Domestic umuthi ofanayo uthi Isikali esiphansi ngokuphelele hhayi eyingozi emzimbeni womuntu. Izimo Okungenzeka sihlobana kungenzeka kuphela ukungabekezelelani ngazinye ezinye izingxenye futhi khona izifo zesikhumba oyingozi.
Umuthi kunciphisa ibala lesikhumba silondoloza kusukela inabukeni amawala futhi iphunga, kodwa ngenxa Teymurova unamathisele i underarm ezinhle kakhulu. Kodwa ngisho lapha kukhona ezinye umehluko. Okwazekayo, lokhu kusho ukuthi senzelwe le njongo, futhi umkhuba umkhiqizo simhlophe ne iphunga elimnandi of menthol eshiya izibazi phezu izingubo. Cabanga ngala maphuzu alandelayo kanye neqiniso lokuthi isikhumba kule ndawo ngesisa ikakhulukazi futhi usentekenteke, ngakho badinga umswakama ezengeziwe. Teymurova nokunamathisela lisetshenzisiwe emakhwapheni kusihlwa esikhunjeni ahlanzekile ezomile. Ekuseni izindlela ezidingekayo ukuze ugeze off, bese usebenzisa noma iyiphi amafutha.
Izinzuzo lo mkhiqizo kufanele futhi ufake yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi. He is ngokulinganayo kuhle kwabesifazane nabesilisa, izimpi ezinkulu fungal izifo, bome isikhumba futhi aqede amaphunga, futhi ngenxa Teymurova nokunamathisela izinyawo Luhle. Kufanele zisetshenziswe nsuku zonke kanye noma kabili, bezihlikihla ngokucophelela isikhumba kuze egxile ngokuphelele, futhi ngaphambi kokusetshenziswa, qiniseka ukugeza izinyawo zakho ngensipho namanzi futhi omile kahle. Inqubo kufanele liphindwe izinsuku ezine, okungcono ebusuku.
Teymurova nokunamathisela sisetshenziswa phezu lisabalele kakhulu, ukuze ugweme isenzo yayo letindzala. Ngaphezu kwalokho, it is contraindicated kubantu abane-komzimba yokubakhona izingxenye zalo ephambili, it is hhayi Kunconywa ukuba isetshenziswe abesifazane ngesikhathi ekhulelwe noma lactation, izingane ezincane kanye khona nesifo esinzima kwezinso.
Uma unama isetshenziselwa Teymurova imilenze, underarms noma kwezinye izitho zomzimba ngempela eside futhi engalawuliwe, kungabangela inombolo okuba nemiphumela engemihle. Kwenzeka njengalelo kuphela Ezimweni ezingavamile kakhulu, kodwa noma kunjalo, ngezinye izikhathi izimpawu umsebenzi wayo letindzala ebonakaliswa ifomu komzimba, izinkinga isimiso sezinzwa futhi wokugaya ukudla. Ngo eziningi kungenzeka emibi ibandakanya ukucanuzela kwenhliziyo, isifo sohudo, ukuhlanza, acute ukusabela anobuthi, ikhanda, amajaqamba, isikhumba uyaxebuka, amawala, ukuvuvukala, noma ukubukeka.
Uma uhlangabezana nanoma iziphi izimpawu ngenhla, ukusetshenziswa unama kufanele inqanyulwe ngokushesha. Njenganoma yimuphi umshini wezokwelapha kanye negalelo elikhulu, zisebenzisa isiqalo yayo best ngokuxoxisana izisebenzi onguchwepheshe.
Izindawo, ophuzi, onsundu, noma ezimhlophe on the amazinyo - bathini?